I-Omah Argopeni Eco Indawo yokuhlala yasekhaya-Ibhedi & nesidlo sakusasa (4p)
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguRara
I-Omah Argopeni Eco Homestay (OAEH) yindawo yokuphumla yendlu yaseYurophu ebonelela ngendalo kunye nomoya okhululekileyo. I-OAEH ikhuthaza igama elithi ECO, ngokusekelwe kwindalo kunye ne-greenery-rich inn yard, kunye nomthombo wamandla oyintloko ukuhlangabezana neemfuno zombane kunye namanzi ashushu avela ekukhanyeni kwelanga kunye nobushushu, kunye ne-photovoltaic kunye ne-Solar Water heater.
Indawo yethu yokuhlala inendlu enkulu e-1 apho kuhlala usapho olundwendwelayo, kunye nendlu yeendwendwe enye emazantsi.
Eli gumbi liyinxalenye ye-Omah Argopeni Eco-Homestay. Olu luhlu luxhotyiswe ngeebhedi ezimbini eziphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela le-en suite. Abahambi ababhukishayo kweli gumbi baya kufumana ikhitshi ekwabelwanayo ngalo, igumbi lokuhlala ekwabelwana ngalo, kunye negumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo.
Sinephakheji yokhenketho oluya eDieng lweqela labahambi, elibandakanya ezothutho, umkhokeli wabakhenkethi, kunye nayo yonke indawo yetikiti lokungena. ukuba unomdla wakho wokutyelela iindawo, sazise, siya kwenza ishedyuli ukuba ilingane neyakho. Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukonwabela ukuphuma kwelanga ePosong, ujonge iSikidang Crater, ulandele igadi yeTambi Tea, kwaye uzive uziva ulanda umkhondo weLake Menjer ngeGetek (uthutho lwamanzi lwemveli), ngelixa umamele izikhokelo zethu esizithembileyo.
Ndisenokungabikho ixesha elininzi, kodwa uya kudibana nomakazi wam othandekayo kunye nomalume njengabamkeli bakho ngexesha lokuhlala kwakho apho :)